Koronofayrus Iyo Cudurka COVID-19
Waa Maxay Koronafayrus?
Marka hore aynu ku horrayno fayrusku wuxuu yahay. Ilma-aragtada nololayda ah waxa si kooban loogu qaybiyaa sadeex; Fungi, Backteria iyo Fayrus.
Fayruska ayaa ugu sii yaryar saddexdaa oon xataa microscope-ka caadiga ah lagu arki karin, sidoo kale halka labada kale kelidood u tarmi karaan, faryusku keli ma tarmi karo, waxay u baahan yihiin inay unug kale oo nool (sida unugyada dadka, xoolaha, dhirtaa ama bakteriayada) dhexgalaan halkaasna ku tarmaan. Unugyada nololayda kale waxay leeyihiin dhaxal abuurka loo yaqaan DNA iyo maadadda kale ee u dhow ee RNA loo yaqaan oo iyadu inoo samaysa proteinska aan la’aantood la noolaan karin. Fayruska ama RNA bay leeyihiin ama DNA, ma wada laha labadaba. Sidaa daraadeed waxa loo qaybiyaa faryuska laba –––RNA ama DNA fayrus.
Koronofayrusku waa RNA fayrus. Waxayna ka mid tahay qayb balaadhan oo loo yaqaan Nidovirales. Jirataankkoda waxa la ogaaday 1960kii. Waxa laga helaa xayawaanka, xoolaha iyo dadkaba. Hore waxaynu u ogayn afar dadka ku dhaca oo kala ahaa HCoV 229E, HCoV 043, HKU1 AND NL63 (2006) oo intuba duriga caadiga ah (common cold) sababa.
Hana la kala saaro duriga caadiga iyo cudurka loo yaqaan influenza ama flu oo badiyaa ka xoog badan. Duriga ama common cold waxa sababa caadi ahaan Rhinofayruses halka flu ka ay sababaan Influenza fayruses. Afarta kronofayrus ee aan kor ku sheegaynaya waxay sababaan duriga caadiga ah ama marmar Bronchitis. Waxa laga yaabaa qof wal oo waayeel ah in nololishiisa uu la kulmay afartaa koronofaryus in ka mid ah.
Qarnigan aynu ku jirno bilowgiisii waxa inaga soo krodhay saddex koronofayrus oo kale oo intuba ka soo boodeen xawayaan ama xoolo (zoonotic baa markaa loo yaqaan). Horantii 2003kii waxa dad qaadeen cudur neef mareenada ku dhaca oo loo bixiyey Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) waxana sababay koronfayrus ka soo booday Civet cats, waa xayawaan xoorka u dhow. Koronofayruskaa waxa loo bixiyey SARS-CoV.
Sanadkii 2012 waxa lagu arkay dalka Saudi Arabia fayrsus kale oo iyanna sababta cudur isna neef mareenada wax yeela oo isna loo malaynayo inuu ka yimid xoolaha geela iyo fiidmeerta. Cudurkaana waxa loo bixiey Middle Eastern Respiratory Syndrome ama MERS, fayruskiina waxa loo bixiyey MRRS-CoV.
Marwal oo aad wax taabataba gacmaahaaga ku mayd saaboon 20 ilbidiqsi ugu yaraan. Caadayso inaanad wajigaaga afkaaga ama sankaaga taaban.
Caadi ahaan qof walba intaa wuxuu sameeyaa saacaddii 23 jeer, maaha wax fudud.
Haddii aad yeelato calamadihiisa hoos ku xusan.
Khasab iskaga dhig inaad ka foogaato dadka kale xataa gurigaaga isku khasabto inaan laguu soo dhowaan ilaa la hubinayo.
Weli ma arkayo meelo ama xarumo si gaar ah loogu talogalay hubinta cudurkan qofka qaba. Nidaamku waxa weeye in qofka iska shakiyaa in aanu tegin xarumaha caafimaadka ee caadiga ah ee uu tago meelo loogu talogalay—si aan bukaanka kale u gudbin.
2. cunna xanuun
Neefta oo qabataWaxaanu ku dambayn karaa pneumonia ama oof.
Biyaha oo aad badsatoXumad jabin (caruurta ha siin aspirin), dhakhaatiir fransiis ah waxay leeyihiin yaan la qaadan ibuprofen iyo kuwa la mid ka ah ee ha la qaato Acetaminophen (Paracetomol, Tylonol).Ku luqluqo biyo diiran oo milix leh si cunna xanuunka u yaraado.